Chaiwo chikafu cheVeracruz, synthesis yeiyo autochthonous neyeSpanish | Kufamba Nhau
Luis Martinez | 24/05/2021 13:15 | Gastronomy, Mekisiko
Chikafu chaicho cheVeracruz chine hwaro hwakakosha hwe zvigadzirwa zvegungwa. Kwete pasina, dunhu iri riri muGulf yeMexico uye, haingori chete nemakiromita mazhinji emahombekombe egungwa, asiwo guta rinozvipa zita rayo rine chiteshi chakakosha kwazvo munyika.
Veracruz raivewo guta rekutanga iro rakatangwa neSpanish Mekisiko. Naizvozvo, iyo Chikwata cheSpanish iripo kwazvo mune yayo gastronomy. Izvi zvinosanganiswa ne pre-Columbian Mesoamerican tsika and with zvinhu zveafrican uye caribbean chikafu kupa kukwira kugastronomy sekumanikidza sezvo kunonaka maererano nema flavour. Kana iwe uchida kuziva zvakawanda nezve izvo zvakajairwa zvekudya zveVeracruz, tinokukurudzira kuti urambe uchiverenga.
1 Chairo chikafu cheVeracruz: Chidiki chenhoroondo
2 Chaiwo chikafu cheVeracruz: Ndiro dzinozivikanwa kwazvo
2.1 Veracruz maitiro ehove
2.2 Arroz a la tumbada, kumwe kunonaka kwechikafu chaicho cheVeracruz
2.3 Minced kana pini
2.4 Zacahuil kana Sacahuil
2.6 Mogo the mogo
Chairo chikafu cheVeracruz: Chidiki chenhoroondo
Zvese izvo isu zvatakakuudza iwe maererano neVeracruz gastronomy zvakafumiswa, uyezve, nezvigadzirwa zvinorimwa munyika dzenyika, yakaorera kwazvo uye yehupenyu hwakasiyana siyana nekuda kwenzvimbo dzinopisa uye dzinopisa dzainadzo.
Asi chinhu chekutanga chatinoda kukuudza inhoroondo diki yezvakajairwa chikafu cheVeracruz. VaSpanish vakaunza zvigadzirwa zvakawanda kubva mukudya kwavo. Pakati pavo, bhinzi, mupunga, gorosi uye ndimu. Asi zvakare nyama senge iyo ye nguruve kana iyo yeiyo hen nezvishongo zvakafanana naye mafuta omuorivhi and the garlic.
Pakangomisikidzwa muVeracruz nyika, vagari vatsva ava vakatanga kurima zvimwe zvigadzirwa, zvimwe zvagara zviri zvetsika muzvikafu zvepamberi peColumbian, nepo vamwe vaive vasina mukurumbira. Pakati pavo paive ne chibage, the coffee nemichero yakaita se chinanazi, coconut, sapote, mango, guava kana orenji.
Nechekare muzana ramakore rechiXNUMX, vatsva vatorwa vakapinda vachibva kunzvimbo dzakasiyana dzepasi avo vakafumisa gastronomy yeVeracruz netsika arab, caribbean uye uchibva Nyika dzeEurope. Zvese izvi zvakakonzera matatu akasiyana chili mukati meyakajairika nyika ino yeMexico. Ngationei.
Creole cuisine ine African American simba. Seizvo zita rayo rinoratidzira, inokanganisa zvinhu zveSpanish, zvechivanhu uye zvemuAfrica. Ndihwo huzhinji uye, pakati pezvinhu zvakajairika zvainoshandisa, mufarinya, uyo waidaidzwa neSpanish kuti yam nekuda kwechitarisiko chayo chakafanana neiyi African tuber; zviyo; shuga kana zvinonhuwira senge Jamaica ruva uye tamarind.
Huasteca chikafu. Izvo zvinoenderana netsika ye teenek town, iri kuchamhembe kweVeracruz. Iyo chaiyo protagonist chibage mumhando dzakasiyana senge chena, yepepuru kana tsvuku. Pakati payo chaiwo mabikirwo pane iyo zacahuill, tamale kana hupfu, yakanyatsogadzirwa chibage, iyo izere nenyama kubva kumhuka dzakasiyana; iyo mole de nopales and the huasteco muto.
Totonac chikafu. Zvakaenzana zvakajairika kuchamhembe, inoenderana nezviyo pachayo, chili mhiripiri uye bhinzi. Pakati payo chaiwo madhishi pane akasiyana marudzi e atoles (zviyo-zvakavakirwa zvinwiwa kubva pre-Spanish nguva) uye Tamales.
Chaiwo chikafu cheVeracruz: Ndiro dzinozivikanwa kwazvo
Sezvatakakuudza, chikafu chinowanzoitwa cheVeracruz chine hwaro hwakakosha hwe hove uye hove, asiwo zvinosanganisira zvinonaka michero yakagadzirwa nezvigadzirwa zvemuno. Tichakuratidza dzimwe dzedhishi idzi.
Veracruz maitiro ehove
Idya iyi inonyatso sanganisa zvinhu zvese zviri zviviri: michero yegungwa uye neiyo yenyika yeVeracruz. Inogona kugadzirwa nechero hove munzvimbo iyi, kubva kuimbwafish kusvika kucabrilla kuburikidza nesnook, tilapia uye basal. Nekudaro, yakanyanya kushandiswa ndeye mutsvuku mutsvuku, anozivikanwa mudunhu sa mutsvuku mutsvuku, hove inonaka kwazvo yemugungwa.
Nekudaro, chakavanzika cheichi chinowanzo chiresi chiri mumuto, izvo, zvinoshamisa, ndeimwe yevashoma vakagadzirwa muMexico izvo hazviite. Zvinosanganisa ayo maorivhi, bay bay, munyu uye mhiripiri, hanyanisi, tomato, parsley, gariki, oregano, maorivhi uye capers.
Kugadzirira kwayo kuri nyore, nekuti, kana muto uchinge wawanikwa, unogadzirwa pamwechete nehove muchoto. Chaizvoizvo kuti uipe iyo inobata bata, inogona kuwedzerwa cuaresmeño chili uye yakashanda nemucheka muchena kana mbatatisi. Pasina kupokana, kushamisika kwekudya.
Arroz a la tumbada, kumwe kunonaka kwechikafu chaicho cheVeracruz
Arroz a la tumbada, chimwe chezvakakosha mune chaicho chikafu cheVeracruz
Tinogona kutaura kuti zvakaenzana ne hove dzedu dzegungwa, kunyangwe iine ayo akasarudzika. Izvo zvinongedzo, kuwedzera kune mupunga, shrimp, crab, clams uye zvimwe zvigadzirwa zvegungwa kune izvo a sofrito yakagadzirwa negariki, hanyanisi, madomasi uye mhiripiri tsvuku. Chekupedzisira, kunaka kwayo kunowedzerwa nemashizha eparsley, oregano, coriander uye epazote.
Zvinotaridza kuti kwakatangira chikafu ichi isu tinofanirwa kutsvaga mune chikafu chevabati vehove avo, muzana ramakore rechiXNUMX, vakaita basa ravo kumahombekombe eVeracruz. Uye, sekuda kuziva, isu tinokuudza kuti inodaidzwa «kurara» kuratidza kuti yakagadzirira muto.
Minced kana pini
Yakakurumbira pakati penzvimbo, ivo hapana chimwe chinhu kunze chibage torilla ne salsa pamusoro uye yakashongedzwa neranchero chizi nehanyanisi. Vanogamuchira zita rekuti pinched, chaizvo, nekuti iyo micheto yekeke yakasvinwa kuitira kuti muto usadonha.
Vanotaridzika kunge sopes Izvo zvinogadzirwa kune yakasara nyika uye, kana iwe uchida kuve nechimwe chinhu chakajairwa kudya muVeracruz, tinovakurudzira nekuti iwo anonaka. Nekudaro, vagari vemunharaunda iyi vanowanzovatora se desayuno.
Zacahuil kana Sacahuil
El Tamale Iyo inozivikanwa kwazvo, kwete muVeracruz chete, asiwo kuMexico yese. Sezvaunoziva, ndizvo chibage chakabikwa chakamonerwa mumashizha acho. Nekudaro, zacahuil ndiyo mhedzisiro yeHuasteca chikafu, sezvatakakuudza kare.
Izvo chaizvo iri hofori tamale, pamwe chikuru pane zvese chaungawana munyika yese. Asi ine yakawanda nhoroondo. Iro bundu rezviyo rakagadzirirwa mune ino kamukira sezvakaita zvizvarwa zvemazana emakore apfuura. Nekudaro, zvinopa kukwirisa kunonzi nixtamal iyo ine zviyo zvishoma pasi uye nechitarisiko chakatsemuka.
Iyi bundu izere ne mafuta enguruve, chili pepper uye nyama yenguruve kana nyama yehuku, pakati pezvimwe zvinoshandiswa. Iyo yekupedzisira ishiri hombe yemuno kuAmerica iyo ine kutaridzika-kunge chitarisiko.
Chikafu chaicho cheVeracruz zvakare chinosanganisira masobho inonaka kwazvo uye ichizadza. Ndiyo nyaya ye chilpachole, vane mavambo avo anonzi akagadzirwa nechikafu cheFrance. Nekuti haisi nezve chero chinhu chisiri chimwe muto wegungwa Yakagadzirwa nehove uye crab (yakajairika yebhuruu crab kubva kumahombekombe eVeracruz).
Zvisinei, chilpachole yakasimba kwazvo kupfuura yechinyakare yegungwa muto. Kune kutanga, inopihwa kuenderana ne chibage bundu. Uye, mukuwedzera, ine hanyanisi, yakaomeswa chili, tomato, gariki uye epazote. Zvese izvi zvigadzirwa zvinopa iyo chimiro chakafanana ne atole, chinwiwa chepakutanga-chiSpanish chakatotangira, kunyangwe ichi chiri chetsika chinotapira.
Chiedza ndiyo Izote maruva muto. Hwaro hwayo ichi chirimwa chemuno cheCentral America uye zvakare chinowanzo kutakura shrimp, chives, tomato, epazote uye nzeve dzepipian. Nekudaro, idzi ipasta inogadzirwa nemhodzi yemanhanga iyo inoshandiswawo kune mamwe madhishi.
Mogo the mogo
Banana mogo, kumwe kunonaka kwechikafu chaicho cheVeracruz
Pakati pezvose zvakajairika madhishi eVeracruz, iyi ingangodaro iri yeimwe yakajeka African midzi. Nekuti, inonziwo machuco, hachisi chimwe chinhu kunze kweku green greenain puree.
Kuti uzviite, izvi zvine ganda ravo zvinobikwa mumvura inodzika. Kana kupfeka kwavo kukaputika, vanobviswa uye bota nemunyu zvinowedzerwa kuvapwanya kusvikira vawana hunhu hwakanaka. Asi ndiro iyi haisati yagadzirira. Iyo puree inobvumidzwa kutonhorera mufiriji kuti iome uyezve yakadzika-fry. Kazhinji, inozopihwa serutivi kune bhinzi.
Kana iwo madhiri atataura nezvazvino achinaka, mapeke eVeracruz haasi kumashure kumashure. Anenge ese mabikirwo ake akavakirwa pa gorosi uye, pakati pemaswiti anonyanya kufarira, isu tichataura iyo chogostas, mamwe mabhora ane ivhu rinodyiwa uye ane mavambo anotangira kune pre-Puerto Rico times.
Dzimwe tsika ndedze madhiri, imwe mhando yematako akazadzwa nekokonati meringue, uye iyo masafin, mamwe polvorones akafukidzwa neshuga nesinamoni. Kana ari iye, tetamal Icho chibage neshuga mukanyiwa unoshumirwa neanise uye wakashanda uchipisa uye wakaputirwa mune bherijao shizha.
La pumpkin Iye ndiye protagonist yemaswiti akati wandei eVeracruz. Ndiyo nyaya ye fritters, kunyangwe, zvine chekuita neizvi, iyo gullets, ayo akazadzwa meringue. Pakupedzisira, iyo pemoles iwo chibage, bota uye shuga donuts uye iyo marzipan kubva kuVeracruz Inoonekwa nekuve nenzungu pachinzvimbo chemaarumondi.
Takatokuudza nezvazvo atole, iyo inogadzirwa mune zvakasiyana siyana zvinoenderana nemuchero wawakagadzirwa nawo. Nekudaro, isu tinogona kutaura nezve atole yebhanana, manhanga, chibage kana coyol (muchero wakafanana nekokonati). Izvo zvakare zvinoshandiswa muVeracruz iyo horchata, kunyangwe isina kugadzirwa senge kuSpain. Ikoko inogadzirwa nemupunga nesinamoni kana vanilla.
Zvimwe zvakajairika zvichiri zvinwiwa senge menyul, Yakagadzirwa nemindi, uye iyo bhuti. Iyo yekupedzisira ichave inonaka, sezvo iine cocoa, mupunga, sinamoni uye michero senge azquiote. Pakupedzisira, iyo nzombe Iyo doro rekudhakwa rine zviyero zviri nzimbe bhurandi, mukaka wakanyoroveswa uye nzungu ruomba, kunyangwe ichigadzirwawo nezvimwe zvinwiwa zvakaita semango.
Mukupedzisa, isu takakuudza iwe nezve chaiko chikafu cheVeracruz. Sezvauchaona, zvinosanganisira madhishi emarudzi ese, ayo anonaka. Asi Veracruz haisi chete inomira kunze kwayo gastronomy, zvakakodzera kushanya, tinokukurudzira kuti uongorore zvakare chii chekushanyira muVeracruz. Kana iwe ukasashinga kuzviita nekuda kwekukanganisa kwedenda, heino chinyorwa nezve iyo zvinodikanwa zvekufamba nenyika saka unogona kuzviita usingatyi.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kufamba Nhau » America » Mekisiko » Chaiwo chikafu cheVeracruz